अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री भट्ट रुपन्देहीको एक कार्यक्रम स्थलबाटै लखेटिए पछि ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री भट्ट रुपन्देहीको एक कार्यक्रम स्थलबाटै लखेटिए पछि !
March 5, 2021 March 5, 2021 Nepal E News
बुटवल, २१ फागुन । अर्थमन्त्री विष्णू पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट कार्यक्रम स्थलबाट लखेटिएका छन् । शुक्रबार मन्त्रीद्वय पौडेल र भट्ट मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्न रुपन्देही पुग्नु भएको थियो । उहाँहरुले ठूलो सुरक्षा घेरामा रहेर औद्योगिक क्षेत्रको सिलान्यास गर्नुभएको थियो । तर उहाँहरुले स्टेजमा गएर भाषण गर्न थालेपछि स्थानीयले ढुंगामुढा गरेका थिए ।
Vivo ले ल्याएकाे नयाँ फाेन जस्लाइ एक पटक पुरा चार्ज गरेपछि १६ घण्टासम्म टिकाउ हुने, कति पर्छ मूल्य?